တရုတ် DL- 1-5 Rolls စူပါနူးညံ့သောမျက်နှာသုတ်ပုဝါပြန်ရစ်စက် Dele
Makeup remover pad စက်
Non-woven roll to sheet စက်သို့
ဤစက်သည်သန့်ရှင်းသောမျက်နှာသုတ်ပုဝါ၊ မျက်နှာသုတ်ပုဝါ၊ နူးညံ့သောမျက်နှာသုတ်ပုဝါနှင့်အခြားထုတ်ကုန်များကဲ့သို့တစ်ခါသုံးနူးညံ့သောမျက်နှာသုတ်ပုဝါထုတ်ကုန်များကိုစီမံနိုင်သည်။ spunlace မဟုတ်သောယက်ထည်အမျိုးမျိုးအတွက်သင့်တော်သည်။ ပြားချပ်ချပ်၊ ကွက်ပေါက်၊ ပုလဲလုံးကြီးများ၊ ပုလဲငယ်များ၊ EF ကောက်နှံများနှင့် jacquard လုပ်ငန်းစဉ်ထည်အမျိုးမျိုး။ ၎င်းသည်စျေးကွက်တွင်အလျင်မြန်ဆုံးထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့်အထိရောက်ဆုံးထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းဖြစ်သည်။
၁။ ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ခေါက်ခြင်း၊ အပေါက်ဖောက်ခြင်း၊ ပြန်ရစ်ခြင်း ခေါက်ဓားတစ်လက်ကိုသုံးသည်
2.Turbine သေတ္တာထိန်းချုပ်ကြိုးမဲ့အကွာအဝေး (10-60 စင်တီမီတာ)
3. ထိရောက်သောအကျယ်: ၁၂၀၀ မီလီမီတာ၊ အချင်းအများဆုံး ၁၀၀၀ မီလီမီတာ
4. အလိုအလျောက်ရေတွက်ပိတ်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက် (အနီအောက်ရောင်ခြည်)၊
5. ပါဝါ: 4.5 kW
၆. လှည့်ရန်： p40mm roller rewind。အချင်း ၃၀၀ မီလီမီတာအတွင်းစက္ကူအမာခံ ၃ လက်မ
၇။ စက်ကိရိယာများတွင်ဆလင်ဒါ ၄ စုံနှင့်အထူးဝတ်ဆင်နိုင်သောခံနိုင်ရည်ရှိသောရော်ဘာဖြန့်ဖြူးပေးသောရှည်လျားသောစကားပြော pneumatic ညှိနှိုင်းမှုကိုတပ်ဆင်ထားသည်။
၈။ ပစ္စည်းကိရိယာများသည်ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းထိန်းချုပ်မှုမြန်နှုန်းကိုထိန်းညှိသည်၊ လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများဝါယာကြိုးသတ်မှတ်ချက်သည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှု၊ သန့်ရှင်းမှု၊ လုံခြုံစိတ်ချရမှုနှင့်လွယ်ကူသောလည်ပတ်မှုတို့ဖြစ်သည်။
၉။ နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းထားသောသံမဏိစက်၏သံမဏိ၊ သံချေးတက်ခြင်းအတွက်မျက်နှာပြင်၊ စက်အားလုံးသည်သံချေးတက်ဆေးသုတ်ခြင်း၊ ဘောင်ဂဟေဆော်ခြင်း၊ သင့်လျော်သောအားဖြည့်ခြင်း၊ စက်သီး၊ ဂီယာများနှင့်ထုတ်လွှင့်မှုအစိတ်အပိုင်းများအားလုံးချောမွေ့စွာလည်ပတ်မှုရှိစေရန်တိကျမှန်ကန်ရပါမည်။ စက်၊ စက်သည်နှစ်နှစ်အတွင်းပလတ်စတစ်ပါ ၀ င်မှုရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ
a စက်ကောင်တာထိပ်နှင့်လည်ပတ်နေသောစားပွဲတင်အစာ: 304 # stainless steel plate ကို သုံး၍ ပြုလုပ်သည်။
ခ သံဖရိမ်၊ သံချေးသုတ်လိမ်းဆေးလိမ်းခြင်းအတွက်မျက်နှာပြင်အရည်အသွေးစံသံမဏိကိုသုံးပါ။
ဂ စံအစိတ်အပိုင်းများဝက်အူများ: ပြည်တွင်းအရည်အသွေးမြင့် 45 # သံမဏိ၊ အချောထည်ပစ္စည်းများအားညစ်ညမ်းမှုဖြစ်စေရန်အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကိုသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်
ဒါလည်း Bearing: ထိုင်ဝမ် "Horse" အမှတ်တံဆိပ်အတွက်ထုတ်လုပ်သောအစိတ်အပိုင်းများ၊ Japan "NSK" အမှတ်တံဆိပ်အတွက်အထူးအစိတ်အပိုင်းများ
င လမ်းညွှန် roller: ရှန်ဟိုင်းထုတ်လုပ်ရေး၊ မြင့်မားသောတိကျသောအလူမီနီယံအလွိုင်းကြိတ်စက်၊
f ဆလင်ဒါသည် "SNS" အမှတ်တံဆိပ်ကိုသုံးသည်
ဆ တံဆိပ်ပြား - အထူ ၁.၀ မီလီမီတာနှင့်အရည်အသွေးမြင့်သံမဏိပြား၊
L5500mm x W1250mm x H1100mm
ယခင်: DL - Ultrasonic laminating စက်
နောက်တစ်ခု: DL- 1-8 Rolls super soft towel rewinding machine
DL-F850 SMT ပြန်ရစ်စက်
DL - Ultrasonic laminating စက်
DL - F3500 Slitting Rewinding စက်
DL - Gluing Laminating စက်
လိပ်စာ: Xiangtun နည်းပညာမြင့်စက်မှုဥယျာဉ် Dexing City Shangrao City Jiangxi Province China